ကြားသိရသမျ Archives - MM Live News
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်က လူနာစောင့်နေတဲ့ ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုအချစ်မျိုးအတော်ရှားသွားတဲ့ ၈၀ ကျော်အဘိုးရဲ့အချစ်
February 29, 2020 MM Live News
ချစ်ခြင်း မေတ္တာဟာ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာ ကောင်းလွန်းလှအောင် စွမ်းအားကြီးလွန်းလှပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ လူနာစောင့်နေတာပါ။ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ အဘိုးအဘွားဇနီးမောင်နှံဟာ အနည်းငယ်ချို့တဲ့ပြီး နယ်ကဆေးရုံလာတတ်တာပါတဲ့။ သားသမီးတွေလဲ တစ်ယောက်ဆီအလှည့်ကျ အဘွားကိုစောင့်ပေးနေရပေမယ့် အဘိုးကတော့ လုံးဝတစ်ရက်မှ နားခိုင်းလို့မရပါဘူး။ အဘိုးကအသက် ၈၀ ကျော်ရှိပြီး အဘွားကတော့ အသက်၇၀ ကျော်နေပါပြီ။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ အဘွားအနားမှာ အဘိုးကတစ်ချက်ကလေးမှမခွာပါဘူး။ အဘွားကလဲလူကြီးရောဂါမို့ အောက်ဆီဂျင်လဲအမြဲပေးထားရပြီး… ၊စကားပြောနိုင်တဲ့နေ့ရောက်ရင် .. အဘိုးမျက်နှာလေးဟာ ရွှင်ပြုံးနေပြီး ရေကိုသေချာချိုး ၊ခေါင်းကိုအုန်းဆီလေးပြောင်နေအောင်လိမ်းပြီး အဘိုးဟာတတ်ကြွနေတတ်ပါတယ်။ မနေ့ကညက တော့ …အဘွားကလုံးဝနာမကျန်းဖြစ်နေပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုမပြတ်တမ်းပေးထားရတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာအဘိုးကိုတော်တော်လေး ပိုသနားလာမိတယ်ဗျာ…. ။ အဘိုးက အဘွားရဲ့လက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး… ”အမေကြီးရေ နေကောင်းတော့မှာနော်… အားတင်းထားနော် စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်မချနဲ့နော်… တရားလေးရွတ်ပေးမယ်နော်… သေချာအာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်နော်ဆိုပြီး ” မျက်ရည်လေးတွေဝဲပြီး အဘွားလက်ကလေးကို […]
တောင်ဥက္ကလာ အထက ၉-၁ဝ တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေသုံးစွဲလာတဲ့ Terco-D ဆေး
ပို့စ်တခု = တောင်ဥက္ကလာ အထက ၃/၁ က ၉-၁ဝ တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ၂ဝ-၂၅ အရွယ်ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ ဒီဆေးကဒ်တွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ အလွယ်တကူလဲ ဝယ်ရတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေကလဲ သားသမီးချင်းမစာနာ ရောင်းတယ်။ တ/ဥ ရဲစခန်းကို အကြိမ်ကြိမ် PH ဆက်လဲ ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ်နဲ့။့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးကို PH ဆက်ပြန်တော့လဲ 199 နဲ့တိုင်ပင်တဲ့ ခေါင်းရှောင်တယ်။ 199 ဆက်တော့ ပိတ်ထားတယ်။ ရက်ကွက်ရုံးပြောတော့ ကလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့။့့ Terco-D ဆေးကို ထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်တယ်။ ATC Classification = R05FA02 ဘိန်းကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချွဲထွတ်စေနိုင်တဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးဖြစ်တယ်။Dextromethorphan HBr 15 mg, […]
မနကျဆယျနာရီတိတိ ကြိုကျခမီရလေယျဘုရား အဓိဌာနျအောငျပှဲမှာအံ့သွဖှယျ ရဆေနျတကျတဲ့ ဆှမျးသပိတျလေးတဈလုံး
February 26, 2020 MM Live News
အံ့သြဖွယ် ရေဆန်တက်တဲ့ ဆွမ်းသပိတ်လေးတစ်လုံး အရမ်းဝမ်းသာပြီး အံသြနေလို့ မနေ့ကညအထိကိုစာမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ….20.2.2020 ကျိုက်ခမီရေ လယ်ဘုရားမှာမနက်ဆယ်နာရီတိတိ အဓိဌာန်အောင်ပွဲဆွမ်းကပ်ရင်းနဂါးမယ်တော်ကိုလည်း နို့ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းကပ်ရင်းအပြီးမှာ ရှင်ဥပ်ပဂုတ်ကိုလည်း သပိတ်ဆွမ်းကပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့သစ်သီးဆွမ်းတော်ပွဲမှာပြီးသပိတ်လေးနဲ့အမွေးတိုင်ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလို့ရေထဲမျောချပါတယ်။လေကအရမ်းတိုက်နေတာမို့ဖယောင်းတိုင်ကိုလူနဲ့ကွယ်ပြီးမနည်းထွန်းခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ငါးစာကျွေးတဲ့နေရာကလှေခါးထစ်တွေအောက်ဆုံးထိဆင်းပြီးသံလွင်မြစ်ရေထဲချရ တာပါ ။စိတ်ကရည်မှန်းပြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆွမ်းကပ်ချင်လို့ပါဘုရား.. လက်ခံပေးတော်မူပါ။ဆွမ်းတော်ကိုသုံးဆောင်ပေးတော်မူပါ ။ဘုရားရှိရာကိုဆွမ်းသပိတ်လေး ဆိုက်ရောက်ခွင့်ပေးပါ။ သန့်စင်သောဆွမ်းဒါနကိုလက်ခံသုံးဆောင်ပေးပါ ။အလှူဒါနကိုသာဓုခေါ်ပေးပါ။ တပည့်တော်ကို လည်းစောင့်ရှောက်ပေးတော်မူပါ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထောက်အပံလေးဖြစ်ချင်လို့ ဆွမ်းလက် ခံ ပေးတော်မူပါလို့ပြောတတ်သလိုပြောလိုက်ပြီး ရေထဲချလိုက်တာပါဘဲ။ရေထဲမှာသပိတ်လေးက ငါးလေးတွေနဲ့လှေခါးထစ်တိုင်နားမှာ သုံးကြိမ်လောက်လည်နေတယ်။ တိုင်ကိုထိလိုက်ပြန်ခွာလိုက်နဲ့သုံးကြိမ်လည်နေတယ်။မီးတိုင်ကမငြိမ်းတော့ကြည့် ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ ငါးစာကျွေးနေတဲ့ လူတွေလည်းရှိတော့ငေးလိုက်ပုံရိုက် လိုက်လုပ်နေမိတယ် ။ အဲ့သည်အချိန်ထိ ရဖျင်ဥပဂုတ်ကိုယ်တော်ကျောင်းဆောင်ရှိတာကိုမမြင်မိဘူး။ ရေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ဘဲဆွမ်းကပ်နေတာဘဲ ။ လူတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မီးမငြိမ်းတဲ့ သပိတ်လေးကိုရိုက်လိုက်နဲ့ပျော်နေမိတယ်။ ပုံရိုက်နေရင်းသပိတ်လေးက ရေဆန်ကိုတည့်တည့် တက်နေတယ်ဟလို့ ဘေးကလူကြီးတစ်ယောက်အော်လို့ကြည့်မိတော့မှ သပိတ်လေးရွေ့နေတဲ့ လမ်းကြောင်းအဝေးကပေလေးရာလောက်မှာရှင်ဥပဂုတ်ကိုယ်တော်သီတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့တယ်။အရမ်းအံသြလို့တဖက်အဆောင်ကိုပြေးကြည့်မိတော့အဲ့သည်ဖက်မှာလည်း လှေခါးလေးရှိနေတယ် ။ တကယ်သပိတ်ချရမှာက အဲ့သည်နေရာကတအဲ့နေရာကနေဆိုကိုယ် တော်အဆောင်နဲ့ ပေနှစ်ရာလောက်ဘဲဝေးတယ် […]
မိနျးကလေးတှေ တျောရုံတာရုံ ခြောရုံနဲ့ ငှကျမစားဘူးတဲ့နျော ….
မိန်းကလေးတွေ တော်ရုံတာရုံ ချောရုံနဲ့ ငှက်မစားဘူးတဲ့နော် …. ဖင်ကြီး တင်ကြီး ရင်ကြီး ဝတာတွေ ပိန်တာတွေ ပိန်ရင်အရိုးများလို့တဲ့ ဝရင်အဆီများလို့ …. အခုခေတ် မော်ဒယ်တွေ တက်မလာနဲ့ ….ငှက်ကြီးက လှည့်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဟေ့… မှဲ့ပါ အနာပါ မျက်နာမှာ ဝက်ခြံရှိရင် ပုဂံခေတ်က ငှက်ကြီးက မစားဘူးတဲ့နော် ​….. ဒီကလေးလေး ပြောတာ နားထောင်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောပေါက်ကြတော့….။ PTTK-Royal Online Shop Vlog unicode မိနျးကလေးတှေ တျောရုံတာရုံ ခြောရုံနဲ့ ငှကျမစားဘူးတဲ့နျော …. ဖငျကွီး တငျကွီး ရငျကွီး ဝတာတှေ ပိနျတာတှေ ပိနျရငျအရိုးမြားလို့တဲ့ ဝရငျအဆီမြားလို့ …. အခုခတျေ မျောဒယျတှေ တကျမလာနဲ့ ….ငှကျကွီးက လှညျ့တောငျမကွညျ့ဘူးတဲ့ဟေ့… […]
ပနျးခွံထဲမှာ တှတေဲ့ လလှေငျ့ကလေးကို သနားလို့ မုနျ့ကြှေးမိရာက ဒုက်ခရောကျခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးရဲ့အဖွဈ (ရုပျ သံ)
မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မြို့ထဲသွားရင်သတိထားလို့ရအောင်ပါ.. !! လမ်းမှာပန်းခြံမှာ ၉နှစ် ၁၀နှစ်ကလေးတွေတွေ့ရင် သနားလို့ဆိုပြီးပိုက်ဆံပေးမုန့်ကြွေး အရောဝင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့… ဒီနေ့ မြို့ထဲ၃၅လမ်းအထက်ဘလောက် လမ်းကြားထဲကပန်းခြံမှာ သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တာတစ်ယောက်ထဲဆော့နေတဲ့ကလေးကိုတွေ့တော့ ညီမလည်းသနားပြီးပါတဲ့မုန့်လေးတွေပေးလိုက်ပါတယ် ….ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ကျေးဇူးပါမကြီး ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေတောင်ကူကိုင်ပေးပါတယ်။ နောက်တော့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ဆီသွားပြီး ရေသန့်ဘူးထဲကိုအဝါရောင်အရည်လိုလိုတွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုထုတ်ရှူပါတယ်…အဲ့ကထဲကမူမှန်တော့တာပါ …ညီမဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နားမှာ ဘယ်ကပါလာမှန်းမသိတဲ့ သံဘူးလိုဟာကိုမြေကြီးကိုပေါက်ချလိုက်ပါတယ် …. လေတိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံပြီး ညီမမျက်ကပ်မှန်ကိုကပ်သွားတော့ မျက်ရည်တွေကျပြီး မျက်လုံးဖွင့်လို့အဆင်မပြေဖြစ်လာရော…အဲ့တာနဲ့အခြေနေမကောင်းဘူး …မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ရမယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုပြေးဖို့လုပ်ရပါတယ်။ အဲ့တာကိုဘယ်ဝင်သွားတာလဲ ပြစမ်းဆိုပြီး အတင်းကပ်လာတော့ ညီမလည်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သွားတော့မယ့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြတာကို နားမလည်ပဲ ရိုင်း”စိုင်း”တွေအော်ဟစ်ပြီးနဲ့ ညီမဘေးကအတင်းကပ်လိုက် တော့ မုန့်ဖိုး၅၀၀ပေးပြီးမလိုက်တော့ဖို့ပြောပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ပြီးကထဲကပိုဆိုးလာပါတယ် …ပါးစပ်ကလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သူ့ထက်အသက်၁၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ညီမကို ရမ်းလန်းတယ် ….ကိုက်စားချင်စရာလေးဆိုတာမျိုးတွေပြောပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲကို အကူအညီတောင်းတော့ ရဲကအဲ့ကလေးကိုအော်ငေါက်လိုက်ပါတယ်…ရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်ခိုင်းတယ်…အဲ့တာကိုရဲကိုရှောင်ပြီး ဆက်လိုက်လာတာ အော်လည်းမရပြောလည်းမရပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့်၆လွှာမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ် ထိပြေးသွားပြီးအန်တီကိုအကူညီတောင်းမှပဲ ပိုက်ဆံယူပြီးအောက်ဆင်းသွားပါတယ် […]